Ny fitelemana ny AirPod dia lasa lozam-pifamoivoizana | Vaovao IPhone
Toni Cortés | 23/06/2021 10:00 | maro
Tranga vaovao an'ny lehilahy iray avy any Massachusetts izay mitelina AirPod. Mazava ho azy fa tsy tompon'andraikitra amin'izany i Apple, fa tsy loza mitoka-monina intsony io ary efa betsaka kokoa ny tranga tsy tokony hisy.
Mitranga izany rehefa mandeha matory ianao mihaino mozika na radio amin'ny alàlan'ny AirPods. Matory eo am-pandriana ianao, manomboka manipy sy mihodina, ary ny AirPods anao mandihy malalaka amin'ilay ondana. Avy eo mandra-pahatongany eo am-bavanao dia dingana iray sisa no ...
Indraindray aho mandeha matory miaraka aminy AirPods amin'ny. Matetika aho no mihaino podcast avy amin'ny onjam-peo tiako indrindra, indrindra ny programa fanatanjahantena, mba haharaka ny vaovao amin'ny klioban'ny soccer tiako indrindra.
Ary imbetsaka ny ampitson'iny dia mila maka ireo AirPods izay niparitaka teo am-pandriana aho, hametraka azy ireo hiandraikitra ny raharaha. Mety hitera-doza ny fatoriana miaraka amin'izy ireo. Satria matory, azonao atelina azy ireo.
Ary toy izany koa no nitranga Brad Gauthier, an'i Worcester, Massachusetts. Tsy tsapany fa nitelina AirPod izy rehefa natory teo am-pandriany. Ary nony nifoha maraina izy dia nanana rano iray vera, dia hitany fa sempotra rehefa nanandrana nisotro azy.
Nahatsapa fanaintainana teo amin'ny tendany izy, saingy tsy nomeny lanja bebe kokoa. Saingy rehefa nitady ny AirPod very teo am-pandriana izy fa tsy nahita dia niahiahy izy fa natelina azy ihany nefa tsy fantany akory. Nihazakazaka nankany amin'ny hopitaly izy, ary rehefa nanao a radiography hitan'izy ireo fa nasainy nipetraka tao amin'ny esophagus ny iray amin'ireo AirPods-ny.
Tsy maintsy nanao endoscope maika izy ireo, ary soa ihany fa novonjen'izy ireo ilay fitaovana alohan'ny hahatongavan'ny vavony. Natahotra ny zava-drehetra. Ny AirPod mbola mihaino tsara, na dia nijanona tsy niasa aza ny mikrô. Tsara vintana i Brad tamin'izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny fitelemana ny AirPod dia lasa lozam-pifamoivoizana matetika
Mampiahiahy ahy bebe kokoa amin'ny fahavaratra izany, matory tsy mitanjaka aho, ary matahotra sao hiafara amin'ny ortho izany.
Eny, tsy dia mampatahotra izany, satria fantatrao fa hivoaka izy io amin'ny farany. Mila mametraka tsindry kely fotsiny ianao. Nefa mitandrema, raha manao tsindry be loatra ianao, dia afaka manidina izy ary mamoaka ny mason'ny vadinao… ary ambonin'izany rehetra izany, tsarovy ny manasa azy alohan'ny hampiasana azy…
Ny Jetpack Joyride mahazatra dia hanana kinova manokana ho an'ny Apple Arcade